लापिस लाजली लेजरुराइट - फेल्डस्टाथाइड सिलिकन खनिज - भिडियो
जन्मदिनहरू के हुन्?
सीम रीप भनेको के हो?
ट्याग लापिस लाजुली
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक ल्यापिस लाजुली किन्नुहोस्
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खनिज घटक लुजुराइट, फिल्डस्पेसथाइड सिलिकन खनिज हो। यसमा कलकत्ता, सोडालाइट र पिराइट पनि समावेश छ। लैजिस लुजलीको केहि नमूना एगाइट, डाईप्साइड, एन्टिटेट, मेिका, हायनाइट, हर्नब्लन्डे, नासेन, र सल्फर-अमीर ललिङ्गाइट geyerite समावेश गर्दछ।
लिपिस लाजली सामान्य रूपमा क्रिस्टल संगमरमर मा संपर्क मेटामिरेमेशन को परिणाम को रूप मा हुन्छ।
तीव्र नीलो रङ क्रिस्टलमा ट्रिसफुल कट्टरल एनिन्सको उपस्थितिको कारण हो। एक इलेक्ट्रोनिक उत्तेजक उच्चतम दोगुनी देखि भरी आणविक कोशिकाओं को निम्न भन्दा कम आश्रित कब्जे वाला कक्ष मा
हामी लापास लाजली को कोकचे नदी मा चूना पत्थर मा पाछन। उत्तर अफगान अफगानिस्तानमा बदखशन प्रांतको एक घाटी। कहाँ सरे-सान मेरो खरिदहरू 6,000 वर्ष भन्दा बढीको लागि खुला छ। अफगानिस्तानको प्राचीन मिश्रको लागि अफगानिस्तान थियो। र Mesopotamian सभ्यता, साथै पछि ग्रीकहरू र रोमीहरू। प्राचीन मिश्रीहरूले यो सामग्री अफ्रिकाको साथ अफ्रिकाबाट व्यापार गरेरर्फत प्राप्त गरे। 2000 BC को बारे मा सिंधु घाटी सभ्यता को ऊंचाई को समयमा। लार्गिस खनिज नजिकैको हरिप्पन कलोनी (लघुुगाई) स्थापित भएको थियो।
सर्बोनको खनिजवादी पियरे बरिन्दको अनुसार। आधुनिक समयमा स्रोतहरूमा नेतृत्व गर्ने काम। र अफगानिस्तानको ब्लू खजानामा उल्लेख गर्न: ल्यापिस लाजुली (2011) लाली मैकनेर बख्तार द्वारा। यो "गुफाहरु" मा पाइन्छ, पारंपरिक "खानहरु" मा छैन। र ढुङ्गा लिगिस लुजुली हिन्दू कुश पहाडको प्राथमिक स्रोत हो। अफगानिस्तानको कोच्का नदी घाटीमा।
अफगानिस्तानको भण्डारको अतिरिक्त, हामीले अन्डेसमा लजिस फेला पार्यौं। ओल्टले, चिली, र टल्टुई लारुरुइट जम्मामा रूस, साइबेरियामा झील बाइकलको पश्चिममा। अङ्गोला, अर्जेन्टिना, बर्मा, पाकिस्तान, क्यानाडा, इटाली, भारत र क्यालिफोर्निया र कोलोराडोमा संयुक्त राज्यमा सानो मात्रामा पनि अयोग्य छन्।
प्रयोग र विकल्प
लापिसले उत्कृष्ट पोलिश लिन्छ। हामी यसलाई गहनामा प्रयोग गर्दछ, नक्कली, बक्स, मोजाइक्सी, गहने, सानो मूर्तिहरू, र भित्ताहरू। पुनर्जागरणको समयमा, लिपिस ग्राउन्ड थियो र वर्णक अल्ट्रामारिन बनाउनको लागि प्रशोधन गरियो। फ्रेस्कोको र तेल चित्रकारीमा प्रयोगको लागि। तेल पेन्टमा वर्णक को रूप मा यसको उपयोग को शुरुआती 19 सदी मा समाप्त भयो। जब एक रासायनिक समान सिंथेटिक किस्म उपलब्ध भयो।
घर | हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
GEMIC कं, लिमिटेड / GEMIC प्रयोगशाला कं, लिमिटेड © प्रतिलिपि अधिकार 2014-2020, जेम्स।